Ny Honor Band 5 dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana | Androidsis
Tamin'ity fahavaratra ity dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Honor Band 5, ny taranaka vaovao amin'ny mpikaroka hetsika ny marika sinoa. Modely iray natomboka tamin'ny tanjona hifaninana amin'ny maodely malaza be toy ny Xiaomi Mi Smartband 4. Rehefa natolotra dia voamarina tany Chine ny fandefasana azy, fa any Eropa kosa dia tsy maintsy niandry ela kokoa vao hitranga.
Ary farany, efa natao ny fandefasana azy any Espana, araka ny nambaran'ny orinasa mihitsy. Ka ny mpampiasa rehetra liana amin'ny fividianana an'ity Honor Band 5 dia efa afaka manao izany. Fehin-tànana izay manana ny zava-drehetra mba ho mpividy indrindra amin'ny marika.
Taorian'ny fahombiazany tany Shina, reraka tamin'ny andro voalohany, ny Honor Band 5 dia misy any Espana izao. Azontsika atao ny mividy an-tserasera, amin'ny tranokalan'ny marika na amin'ny fivarotana hafa. Ny vidiny dia eo amin'ny 30 euro, satria miankina amin'ny magazay ividiananao azy, mety misy tsy fitoviana. Na dia manodidina io vidiny io aza dia ara-dalàna.
Azo amidy amin'ny loko telo izy izay hitantsika tamin'ny famelabelarany. Izy ireo dia ny Dahlia Pink (mavokely), Classic Navy Blue (manga) ary Meteorite Black (mainty). Ny volondavenona / maintso hita eo amin'ny sary etsy ambony dia tsy miseho ivelany, noho izany dia toa avela irery any Chine amin'ity tranga ity.
Fehin-tànana afaka amidy tsara sy ho mpifaninana tsara ho an'ny Xiaomi's Mi Smartband 4. Ankoatr'izay, ny fahasamihafana eo amin'ny vidin'ity Honor Band 5 ity dia kely, na dia natahorana ho lehibe kokoa aza izany, zavatra iray izay tsy isalasalana fa nahatonga ny fehin-tànana afaka nivarotra tsara kokoa tany Espana.
Noho izany, raha mieritreritra ny hividy brasele hetsika ianaoManana safidy vaovao misy ianao, amin'ny endrika an'ity Honor Band 5 an'ny marika ity, izay efa ofisialy any Espana ary afaka mividy amin'ireo mpaninjara ofisialy izahay. Ahoana ny hevitrao momba ity famotsorana ity?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ny Honor Band 5 dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana
Tropico dia tonga amin'ny Android mba hahafahanao ho lasa mpitarika nosy Karaiba